अन्तत: परे अल्पमतमा ओली, प्रधानमन्त्री पद जाने पक्का, नयाँ प्रधानमन्त्री को ? Nepalpatra अन्तत: परे अल्पमतमा ओली, प्रधानमन्त्री पद जाने पक्का, नयाँ प्रधानमन्त्री को ?
अन्तत: परे अल्पमतमा ओली, प्रधानमन्त्री पद जाने पक्का, नयाँ प्रधानमन्त्री को ?
प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वास मत लिने तयारी गरिरहेकै बेला माओवादीले समर्थनमा मत नहाल्ने निर्णयसमेत गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गरेर बनेको नेकपासँग १ सय ६९ सांसद थिए । माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद रहेकोमा चार जना निलम्बनमा परेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
देउवा-प्रचण्डको गोप्य बैठकमा सुटुक्क छिरे उपेन्द्र यादव